Ọkpụkpụ kansa - Akpata, nchọpụta, ọgwụgwọ na ọgwụgwọ.
Ọrịa cancer bụ ihe ana-eme uto ụbụrụ n’ọkpụkpụ anụ n’ọkpụkpụ. Ọrịa cancer nwere ike ịnwe njo ma ọ bụ jọka njọ, o nwere ike ime n’ọkpụkpụ n’onwe ya ma ọ bụ dịka uto n’ọkpụkpụ onwe ya. Ọrịa kansa nwere ike ibute mgbu na-enweghị nkọwa, mmụba ụkwụ na-akawanye njọ, ọzịza na oke ihe mgbaji / mgbaji ụkwụ na-arịwanye elu. A na-ejikarị nchọpụta ahụ Onyonyo (X-ray, CT ma obu MR), mana ọ nwekwara ike ịdị mkpa iji nlele nke anụ ahụ, nke a maara dị ka ihe okirikiri, iji gosipụta enyo.
- Gini bu ihe di iche n’etiti oria mbu na metastasis?
Dịka anyị kwuru, ọrịa kansa nwere ike ịkpa ike ma ọ bụ mebie emebi. Ọrịa kansa pụtara na ọrịa kansa ahụ agbasaghị n’akụkụ ahụ ndị ọzọ. Ọrịa kansa ga-eme ka akpọrọ metastasis, nke pụtara ịgbasa n’akụkụ ahụ ndị ọzọ. Cancerdị ọrịa kansa dị iche iche nke ọrịa kansa nwere ike ibubata na akụkụ ahụ niile.
Mgbe anyị na-ekwu maka ọrịa kansa bụ isi, dị ka ọrịa cancer nke ọkpụkpụ, anyị na-ekwu na ọ bụ ọrịa cancer guzobere ma ọ bụ n’ọkpụkpụ. Site na metastasis cancer ọkpụkpụ a kwenyere na enwere ọrịa cancer ọzọ bụ isi (dịka cancer ara ma ọ bụ ọrịa cancer) nke gbasara na ọkpụkpụ.
Ọrịa na-arịa ọrịa na-adịghị mma na-ahụkarị ọrịa kansa ọkpụkpụ dị njọ
N'ụzọ dị mma, ọrịa ọjọọ ọkpụkpụ kachasị njọ dị obere. Na United States, e mere atụmatụ na ọ bụ nanị 2500 na-anata ụdị ọrịa kansa ahụ kwa afọ. Nọmba a ewezuga nchoputa nke otutu myeloma (akpọ otutu myeloma na bekee), ụdị ọrịa kansa nke kachasị emetụta ụmị ọkpụkpụ ma ọ bụghị n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị n'èzí.
Ihe mgbaàmà nke ọrịa kansa ọkpụkpụ
Ihe mgbaàmà mbụ nke ọrịa kansa ọkpụkpụ nwere ike ịbụ ihe mgbu na ọkpụkpụ n’onwe ya, nke a ga-akọwahie ma ọ bụ nwee mmetụta na-eto eto mgbu. Ihe nrịba ama mbu nke oria obula nwere ike buru nfuputa ma obu nkpuru nke na adighi emeru aru. Nke a nwere ike jiri nwayọ nwayọ na-egbu mgbu ma mgbu ga-akawanye njọ nwayọ. Ọtụtụ na-akọwa mgbu na okwu dịka obi mgbu. Na njirimara, ihe mgbu na-adịgide na ezumike na n'abalị. Ọrịa cancer nwere ike ime ka ọkpụkpụ mebie ruo mgbe ọ ga - eduga na nke a na - akpọ ọnya ọgbụgba Ọkpụkpụ ndị na-ekwesịghị ime na ọkpụkpụ ọkpụkpụ nkịtị.
Kedu otu esi achọpụta ọrịa cancer ọkpụkpụ?
Ekwesịrị inyocha ogologo mgbu, na-adịgide adịgide ma ọ bụ nke nwere oke X-ray. Igwe X-ray nwere ike igosi na enwere uto nke okpukpu okpukpu na ihe ndị yiri ya, ma ọ nwere ike isi ike ịkọwa ma ha dị njọ ma ọ bụ dị njọ. Ekwesiri ikwu na enwere otutu udiri oria nke okpukpu na onodu nke nwere ike igwa ya site na uwara X, tinyere oria Paget, chondroma, akpukpo ahu okpukpu, fibroma na-adighi aru (ogwu fibrous n’enweghi okpukpu ahu, nke a na-achoghi na-achoghi fibroma na bekee) na dysplasia fibrous (fibrous dysplasia on norsk).
Ọ bụrụ na nyocha X-ray emechaghị, ị nwere ike ịgbakwunye ya na otu Nnyocha MRI ma ọ bụ Onyonyo CT - ụdị nyocha a ga-enwe ike ịkọ kpọmkwem nha na ọnọdụ, nke n'aka nke ya na-enye ozi bara uru mgbe a bịara n'ịchọpụta nchoputa ziri ezi. Njikọ ikpeazụ na nchoputa bụ otu biopsy, ebe ị na-ewere otu sel site n’itinye agịga n’ebe ahụ emetụtara. Ihe bụ nsogbu bụ na ị nwere ike ị gbaba mkpụrụ ndụ kansa n’onwe ya. Yabụdị ụdị nchọpụta a abụghị 100% nchekwa.
Ndepụta ụdị ọrịa cancer dị iche iche
Ọkpụkpụ ọrịa cancer ọkpụkpụ
- Igha mkpụrụ mkpụrụ ndụ izizi
Ọkpụkpụ cancer cancer ọkpụkpụ
- myeloma (makwaara nke oma dika otutu myeloma na bekee)
- Ọrịa na-egbu egbu na-adịghị mma
- Ọkpụkpụ silcoma ọkpụkpụ
- Ọkpụkpụ sel nke na-emebi emebi
- Ọrịa ara ure, ọrịa kansa akpa ume, kansa prostate, ọrịa akụrụ, ọrịa kansa na ọrịa kansa nke eriri afọ nwere ike gbasaa n’ọkpụkpụ.
- Enwere ike ikwenye nyocha ahụ site na ntanetị na ọ bụrụ na ọ dị mkpa; ihe omimi.
- msdị ọgwụgwọ gụnyere radieshon, chemotherapy na / ma ọ bụ ịwa ahụ. Emere ya n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya ọganihu dị ukwuu n'ịgwọ ọrịa kansa (Njikọ PubMed).